Alarmtù Ahụ Ike Worldwa mkpu: COVID ga-akawanye njọ
Home » Akụkọ Ahụike » Alarmtù Ahụ Ike Worldwa mkpu: COVID ga-akawanye njọ
Nwere ike 15, 2021
Healthtù Ahụ Ike alarmwa mkpu
Onye isi ochichi Healthtù Ahụ Ike (wa (WHO) Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus kwupụtara ọkwa ịdọ aka ná ntị taa banyere COVID coronavirus ka ya na ndị iche iche ya na-abanye n'ime afọ nke abụọ.
N'agbanyeghị ọgwụ mgbochi na-eme gburugburu ụwa, Healthtù Ahụ Ike Worldwa na-ebu amụma afọ 2 nke COVID ka ọ ka njọ karịa otu afọ.
WHO na-aga n'ihu ikwu na afọ a ga-aka njọ karịa.
Agbanyeghị na ntụzịaka ọhụụ sitere na CDC na - ekwu ihe nkpuchi adịghị mkpa maka ịgba ọgwụ mgbochi zuru oke, ọtụtụ na - ekwu na akaghi aka iji mee ọkwa ahụ.
Director General nke WHO kwuru, "Anyị na-eso ụzọ nke afọ abụọ nke ọrịa a ka ọ dị njọ karịa nke mbụ."
Na Japan, ọnọdụ mberede nke coronavirus weere mpaghara 3 ọzọ naanị izu 10 tupu Olimpik. Tokyo na mpaghara ndị ọzọ nọ n'okpuru iwu mberede rue ngwụcha Mee, yana Hiroshima, Okayama, na ugwu Hokkaido, nke ga-akwado Marathon Olympic, na-esonye ha ugbu a.
Japan na-alụ ọgụ ugbu a nke anọ nke coronavirus nke na-etinye nnukwu nsogbu na usoro ahụike ya. Eruela akwụkwọ mkpesa nwere ihe nbinye karịa 350,000 na-akpọ ka akagbuo Egwuregwu ndị ahụ.
Na Taiwan, ebe ntụrụndụ dị ka ụlọ mmanya, ụlọ oriri na nkwari abalị, ebe a na-eri karaoke, ụlọ ịntanetị, saunas, ụlọ tii, ụlọ ndị ọbịa, na klọb ịgba egwu, yana ebe egwuregwu, na ọbá akwụkwọ dị na Taipei emechiela mgbe ebili mmiri nke ọrịa COVID gbawara. nke malitere n’etiti otu ndị ọkwọ ụgbọ elu.